ရေမွန်ရဲ့ ၃၃နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အလှူအဖြစ် နယ်မြို့လေး တစ်မြို့မှာ အလှူလေးပြုလုပ်မယ့် အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ မိခင် ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မြတ်မွန် – Ngwe Yaung Nate News Media
Ngwe Yaung Nate 1 | November 24, 2021 | news | No Comments
ရေမွန်ရဲ့ ၃၃နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အလှူအဖြစ် နယ်မြို့လေး တစ်မြို့မှာ အလှူလေးပြုလုပ်မယ့် အကြောင်းကို ပြောပြ လာတဲ့ မိခင် ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်
ပရိသတ်ကြီးရေ… ရေမွန်ကတော့ အသည်းအသန် အားပေးခဲ့ရတဲ့အဆိုတော် တစ်ဦးပါ။အခု ဆိုရင် ဆုံးပါးသွားခဲ့တာ ဒီနေ့နို ဝင်ဘာလ၂၃ရက်နေ့ကတော့ သူ့ရဲ့ ၅လပြည့် တဲ့နေ့ လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ၂၆ရက် နေ့ က တော့ ရေမွန်ရဲ့ ၃၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တာကြောင့် ရေမွန်ရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်းနယ်မြို့တမြို့မှာအလှူ လေးပြုလုပ်မယ့် အကြောင်းကို မိခင်ဖြစ်သူ ​ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်ကပြောပြ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီနေ့ တွတ်ပီ လေး ဆုံးပါးသွားတာ ၅လ တင်းတင်း ပြည့်ပြီ ဒီလ 26 th ကလဲ တွတ်ပီ 33 နှစ် ပြည့် မွေးနေ့မို့ သူ့အတွက် ထူးထူး ခြားခြားလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ ကြံရွယ် ထားတာသူကလဲ(တဆင့်ကြားခံနဲ့) နယ်(အဖိုးအဖွား ဆွေမျိုးများရဲ့ဇာတိ) မှာလှူပေးဖို့သေချာမှာထားတယ်ဒါပေမဲ့ အခြေအနေတွေ မကောင်းလို့ ရက်‌နဲနဲရွှေ့လိုက်ပါတယ် (အိမ်ကဘုရားလဲ ဘုရားပါဘဲလို့အကန်တွေပြောပြီး blame မလုပ်ကြ နဲ့နော်
စဉ်းစားဆင်ခြင်တုံတရားရှိပြီးနားလည်လို့ မသွားသေးတာအသက်ကိုဉာဏ်နဲ့ စောင့်ရှောက် နေတာ)(စိတ် ရင်းအတိုင်းဆို အိမ် ဘုရားတင် မက နယ်မြို့ ‌လေးက မပြည့် စုံတဲ့ ဘုရားစေ တီတွေ၊နွမ်းပါးချို့ တဲ့ တဲ့ ကျောင်း တွေ၊သံ ဃာတွေ ကို တ ပိုင် တ နိုင် လှူ ဒါန်းထောက် ပံ့ချင်စိတ်လေးနဲ့ သွားချင်တာပါ။ Post တစ်ချို့တွေမှာလို ဘုရားဖူး အ ကြောင်းပြ ဖလန်း ဖလန်း ထပြီးအ ပျော် ကျူးဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိ ! နကိုကလဲအဲ့လိုမနေခဲ့ဖူးပါတွတ်ပီမရှိတော့ထဲက အပျော်ဆိုတာလဲ ကိုယ်နဲ့ မသက်ဆိုင် တော့ပါဘူး
ဒါပေမဲ့ သေသူကလဲ တောင်းဆို ထားတယ်သေသူတွေမပြုလုပ်နိင်တော့တဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှူတွေကို ဆက်လက် ရှင်သန် နေသူတွေကရည်စူးပြီး လှူဒါန်းလုပ်ကိုင် ပေးရမှာလေ !!!ဒါကြောင့် ဘာလုပ်လုပ် အပြစ် မြင်တတ်တဲ့ အကန်စိတ် တစ်ခုထဲနဲ့ ကျေးဇူးပြု၍လာ blame မလုပ်ကြပါနဲ့နော် ! လုပ်ရင်လဲ ဂရုမစိုက်ပါဘူးကုသိုလ်ကြားထဲ ဒေါသ မရောစွက် ချင်လို့ပါ)
ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ နေအိမ် ဘုရားမှာဘဲဆွမ်း၊ပန်း၊ဆီမီး၊ရေချမ်းကပ်လှူ ပြီးသူ့ အတွက် ဆုတောင်း အမျှဝေ ပေးလိုက်ရ ပါ တယ်။အားလုံးလဲ အမျှရကြ၍ ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ”ဆိုကာ ရှင်းပြ ခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ရှူ့ ပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း ပျော်ရွှင်သော နေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်။
အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတာကြောင့် လူမုန်းခံခဲ့ရပေါင်းများပြီဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
မိုးရေထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း ဈေးရောင်းကာ ရုန်းကန် နေရတဲ့ အဘတစ်ဦးကို ကူညီမှုတွေ ပေးခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော် မိုးစက်
Doodle Art ဖန်တီးမှုနဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး လေလံအောင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ပြုလွှာရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ကျားပေါက်
ဒီနေ့မှာ မွေးနေ့ရက်မြတ် ကျရောက်တဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော် တန်ခွန်ကျော်